TRUTH AND PEACE: December 2008
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 31.12.082ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော် လေးစားရတဲ့ ရေးဖေါ်ရေးဖက် နဲ့ စာဖတ်သူများ အားလုံး မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်မှာ ဓမ္မ ထွန်းကားအောင် ဆောင်နိုင်သည် ဖြစ်စေ သောဝ်။
သုတေသန အတွက် ပါနာတိပါတကံ ကျူးလွန်နေရတဲ့ အတွက် သီလပင် မလုံနိုင်။
ဒီအထက်က စာသားလေး ကတော့ ကျနော် လေးစားတဲ့ အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်က ရေးခဲ့တာပါ အားလုံး လဲသိကြမှာပါ မြင့်မိုရ်ဦးဘလော့ ပိုင်ရှင် ဒေါက်တာညဏ်ပါ။
လောက ဆိုကတည်းက အဓမ္မနဲ့ဓမ္မတို့ အားပြိုင် စစ်ခင်းရာဟု ပညာရှင်တို့ ဆိုကြ၏။ ဆိုခဲ့သည်အတိုင်းလည်း လောကသည် ဓမ္မနဲ့အဓမ္မတို့ အားပြိုင်မှု ရှိနေသည်မှာဓမ္မတာ။
ဓမ္မက အနိုင်ရသည့်အခါ လောကသည် တည်ငြိမ်၏။ အေးချမ်း၏။ ထို့အတူ လောကသားတို့ ချမ်းသာ၏။ လောကသား ဟူရာ၌ လူလည်းပါ၏။ နတ်လည်းပါ၏။ တိရိစ္ဆာန် လည်းပါ၏။ ခြုံငုံ ပြောဆို ရပါလျှင် (၃၁) ဘုံမှ မလွတ်မြောက်သော သူ အားလုံးကို လောကသား များဟု ဆိုနိုင်ပါ၏။ သို့အတွက် လောကကြီး တကယ်တန်း ငြိမ်းချမ်းရန် အတွက် အားလုံးတွင် တာဝန် ကိုယ်စီရှိကြပါ၏။ လောက၌ အဓမ္မတရားတို့ မထွန်းကားအောင် မပျံ့ပွားအောင် ကြိုးစားအားထုတ် ရာ၏။ ထိုသို့ အားထုတ်ရာ၌ မိမိကိုယ်ကို လည်းကောင်း မိမိ၏ ဘ၀ကို လည်းကောင်း လောကအတွက် စတေး ရမည်သာဖြစ်ပါ၏။ ဘုရား အစရှိသော သူတော်ကောင်း တို့သည် အလောင်းတော် ဘ၀ များ၌ ငါးပါးသီလကို ချိုးဖေါက်ခဲ့သည်သာ။ သို့သော် အဆိုပါ ပုဂိုလ်တို့ ချိုးဖေါက်ခြင်းကား လောက၌ဓမ္မ ထွန်းကားရေး အတွက် အနစ်နာ ခံခြင်းသာလျှင်ဖြစ်သည် ကို ပိဋကတ်တော်များတွင် ဖတ်ရှု ခဲ့ကြပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ကျတော်တို့ လည်း ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ ကို တိုင်းတပါးတို့ ထိခိုက် စော်ကားလာသည် ရှိသော် ပါဏာတိပါတ သိက္ခာပုဒ် ကို ချိုးဖျက်မည်သာ။ “သူ့နိုင်ငံသားသံမှုန့်စားမှ ဒို့ဓါးတုံးလိမ့်” ဟူသော အယူကို ကိုင်ပြီး တိုက်မည်သာ ဖြစ်ပါ၏။
စင်စစ် ထေရ်ရ၀ါဒ အရ ဘ၀ကို တည် ဆောက်မည်ဆိုပါလျှင် မိမိ၏ ဘ၀ကို လောက အတွက် အနစ်နာခံပေးဆပ် ပါမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်သည် ထေရ၀ါဒ တိုင်းပြည်ဟု ဆိုကြ၏။ အမှန်တကယ် ထေရ၀ါဒ အုပ်မြစ် ခိုင်နေပြီလော အမှန်တကယ် ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာကို တန်ဖိုး ထားတတ်ပြီလော မေးစရာတွေ ရှိနေမည်သာ။ အမှန်တကယ် ဓမ္မတရားတို့ ထွန်းကားနေသည်လား မဆုံသေးသော မေးခွန်းများ တွေးစရာများ ရှိနေပါ၏။ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကရော ထေရ်ရ၀ါဒ၏ စစ်မှန်သော အနက်အဓိပါယ် ဆုတ်ကိုင်မိပြီလော ဟု စစ်တမ်းထုတ် အဖြေရှာနေဆဲဖြစ်ပါ သည်။
သီလတော် သည် ဘုရားပွင့်လည်းရှိ၏။ ဘုရားမပွင့်သော် လည်း ရှိနေသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့အတွက် ငါးပါးသီလတော်ကို နိစ္စ သီလတော် ဟုဆို ကြ၏။ လောက ငြိမ်ချမ်းရေး အုတ်မြစ် ဟု လည်းဆိုပါ၏။ ထိုအတွက် ဘုရား သာနာတော် အတွင်း ရှိသော ငါးပါးသီလ တော်သည် သစ္စာ ဆိုက်နိုင်သော အသိတိုင် အောင် အကျိုးပြုပါ လိမ့်မည်ဟု ကျနော်ယုံပါသည်။ ကျနော်တို့အနေဖြင့် လည်း သစ္စာဆိုက် အောင် အနက်ကို ရှာဖွေဆန်ံထုတ်ပါမှ သာသနာတော် အတွင်း သီလကို မြင်ပါလိမ့်မည်။ သို့မှ ပို၍လောက ငြိ်မ်းချမ်းမည်ဖြစ်ပါ၏။
တတိယ သိက္ခာပုဒ်တော်အရ ကာမေသုမိစ္ဆာရ ကို ကြည့်မည်ဆိုပါက
တိုက်ရိုက်အနက်= ကာမအရာ၌ မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်း
သွယ်ဝိုက်အနက်= မိမိရသင့် ရထိုက်သော အခွင့်ရေး ထက်ပို လိုခြင်း/ ယူခြင်း
ဆန့်ကျင်အနက်= မိမိ ရပိုင်ခွင့်များကို လောကအတွက်စွန့် လွတ်ခြင်း
သမုတိ သစ္စာအရ ကာမအရာ၌ မှာယွင်းယုတ်ညံ့စွာကျင့်ခြင်း ဟူဆိုရာတွင် သူတစ်ပါး သားမယား သားသမီး ကိုဆို၏။
ပရမတ္ထ သစ္စာအရ ကာမဂုဏ် ဆိုရာ၌ ရူပါရုံလည်း ပါ၏။ သဒ္ဒါရုံ လည်းပါ၏။ ဂန္ဓာရုံ့လည်း ပါ၏။
သောတာ၊ဖောဋ္ဌဖ္ဗ အစရှိသဖြင့် ကာမ၈ုဏ် အာရုံ အားလုံး ပါမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုထိုသော ကာမဂုဏ်တရားတို့၌ မှားယွင်စွာ ကျင့်ခဲ့ပါလျှင်။ အရပ်စကား အရ ပြောရလျှင် မိမိနဲ့ မထိုက်သော နေရာ၊ ငွေကြေး ဘွဲ့ ထူး ဂုဏ်ထူး ကိုမရ ရအောင်ကြံဆောင် လျှင် ထိုသိက္ခာပုဒ်ကိုကျူး လွန် ရာရောက်ပါ၏
ကာမေသု သိက္ခာပုဒ်၏ တရားကိုယ်ကား လောဘ ဖြစ်၏။ ဿသတဒိဋ္ဌိနဲ့ယှဉ်၏ ထိုသိက္ခာပုဒ်ကို တယ်တန်း လုံခြုံအောင်ထိန်းမည်ဆို လျှင် မိမိ၏လောဘကြောင့်ဖြစ်ပေါ် လာသောဆန္ဒ များကို မပွားစိးအေင် သတိပညာနဲ့ပယ်သတ်ရပါ လိမ့်မည်။
မုသာဝါဒ သူတစ်ပါးအား လိမ်လည်ပြောဆို ခြင်း ဟုဆို၏
သွယ်ဝိုက်အနက်= ဟန်ဆောင်ဖုံကွယ်ခြင်း နဲ့ ကျန်ဝစီဒုစရိုက် သုံးပါး
ဆန့်ကျင်အနက်= သစ္စာ ဓမ္မထွန်ကားအောင် ထုတ်ဖေါ်ပြောဆို လုပ်ကိုင်ခြင်း။
တကယ်တန်း မုသာဝါဒကံ ကို လုံအောင် ထိန်းမည် ဆိုပါလျှင် ကျနော်တို့၏ နှလုံသားကို သစ္စာမြေပေါ်၌ အုတ်မြစ် ခိုင်အောင် ချရန်လို အပ်ပါသည် အတုကိုဖယ်၍ အစစ်ကို တန်ဖိုး ထားတတ် ရပါမည။် သစ္စာတရား ထွန်းကားရေးအတွက် မိမိဘ၀ကို လောအတွက် အသုံချရဲသော သတ္တိကို မွေးမြူရပါလိမ့်မည်။
ဆိုင်ရာ ညဏ်ရောက်မှ ဆိုင်ရာသော ကိလေသာမီး ကို ငြိမ်းနိုင်ပါမည်ဟု သိပါလျှက် ကျနော်သည် ညဏ်မှီသလောက် ငါးပါး သီလတော် ကို ပူဇော်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံပါသည်။
၂၀၀၉ မှာ ဆွေသဟာ ကြည်သာဧမြရှိပါစေ
မသူတော်ဘေး အဓမ္မဘေး ကင်းဝေးကြပါစေ
ကျမ်းကိုး။ ။ ဘ၀အမြင်သစ် (ဆရာကြီးဦးရွှေအောင်)
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 31.12.084ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
အညွှန်း ၊ အတွေး
ငါးပါးသီလမြဲသလား? တဲ့ ဒီမေးခွန်းကို ကျနော် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အမေးခံခဲ့ရဖူးတယ်ဗျ
အဲလိုမေးလာခဲ့တိုင်းလည်း ကျနော့်အဖြေက“ဟင့်အင်း”ပဲထွက်တယ်ဗျ၊ ဘယ်သူမေးမေး
မေးဆိုလို့ပြောရဦင်္းမယ်ဗျ.. ကျနော်သွားနေကြဆရာတော်ကြီး ဦနန္ဒမာလာရဲ့သက်တော် (၉၅)နှစ် မြောက် မွေးနေ့တုန်းကလည်း ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် ပရိတ်သတ်အလယ်မှာ မေးဖူးပါတယ်၊ ကျနော်ကလည်း ဖြေပါတယ်ဗျာ ရဲရဲဖြေတာပေါ့ “လုံးဝငါးပါးသီလမလုံဘူးပေါ့” အဲလိုဖြေတော့ ဆရာတော်ကြီးက ပြုံးတယ်ဗျ ပရိသတ်လည်းပြုံးတယ်ပေါ့ဗျာ။
အမှန်တော့ သီလတော်မြတ်က သိမ်မွေ့လွန်းတယ်ဗျ၊ ဒီလောက် သိမ်မွေ့လွန်းတဲ့ တရားတော်မြတ် သီလတော်ကို ကျနော့်လိုငမိုက်သားက နားလည်အောင်ကို မနည်းကြိုးစားနေရသူမို့ မဂ်တရား ဖိုလ်တရား နိဗ္ဗာန်တရားအကြောင်းတွေကို ညဏ်စဉ်အဆက်ဆက် ဒိဋ္ဌိသတ်နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆွေး နွေးနေတဲ့အထဲ ၀င်ပါချင်ပါလည်း မ၀င်ရဲတဲ့အဖြစ်ပါဗျာ၊ တစ်ခါတစ်လေများဗျာ စိတ်ရှိလက်ရှိပြောနေ လိုက်ကြတာ.. အာလုံးနီးနီးသောတပန်၊ သကဒါဂမ် ၊ အနာဂမ်လောက်နီးနီးပါ.. အားကျတယ်ပေါ့ဗျာ။
တစ်နေ့ကလည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အလှုကိုသွားတော့ ဘုရားခန်းထဲမှာ သီးသန့်စားပွဲနဲ့ တရားဆွေးနွေးတာ တွေ့တော့လည်း ခပ်ဝေးဝေးက ပြန်လာခဲ့ရပြန်တယ်။
တခါတုန်းကများ တရားဆွေးနွေးနေကြတဲ့ လူကြီးတွေဝိုင်းနာသွားပြီး နားထောင်ကြည့်တာ ကြားရတာနဲ့တင် ကျနော် လှည့်ပြန်လာခဲ့ရတာလေ၊ စဉ်းစားကြည့်လေ... ပြောနေကြတာက ကျမ်းအကိုး အကား အပြည့်နဲ့ဆိုတော့လည်း ကျနော်မ၀င်ရဲပေါင်ဗျာ။
ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲထင်တယ် ကျနော့်ညဏ်က သီလအဆင့်ကမတက်သေး။ တစ်ခါတုန်းကလည်း တောထဲမှာ တရားကျင့်နေတဲ့ ဆရာတော်ဆီသွားဖူးတော့ “သားငယ်လေး ဘာကြောင့်ပျင်းတယ် ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ရှာခဲ့” လို့မိန့်တော့ ဘာကြောင့်ပျင်းတယ်ဆိုတာကို ရှာလိုက်တာဗျာ သုံးနှစ်ကျော်လောက် ကြာတယ် အပျင်းတရားကိုတောင် ဒီလောက်ကြာခဲ့တဲ့ ကျနော့်အဖို့ ကျန်တာတွေ မတွေးရဲသေးဘူးဗျ အခုလည်းအားနေရင် သီလကြောင်းလေးပေါ့ဗျာ စဉ်းစားနေတတ်တယ်ပေါ့။ ဒီလိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ သာသနာပ ကာလမှာလည်း (၅)ပါးသီလရှိနေတယ်၊ အခု သာသနာတွင်း ကာလမှာလည်း (၅)ပါးသီလက ရှိနေတယ် အနက်အဓိပ္ပါယ် ကွာမယ်ပေါ့ တွေးကြည့်တယ် ညဏ်မှီသလောက်ပေါ့ဗျာ။
စဉ်းစားရမဲ့လမ်းကြောင်းက ဆရာတွေသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ ဘာ လဲဆိုတော့
“ သားငယ်ရေ လောကကြောင်းကိုချဉ်းကပ်မယ်ဆိုရင် ပညတ်ကို ညဏ်ကုန်လွတ်ဟေ့ ဒီလိုပဲ ဓမ္မကြောင်းကို ချဉ်းကပ်ပြီဆိုရင်တော့ ပရမတ်ကို ညဏ်ကုန်စိုက်တော့”
ဒီလိုသွန်သင်ခဲ့ဘူးတော့ လည်း ကျနော်သီလို့ ဆင် ခြင်ကြည့်တယ်ဗျ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သီလ ဘယ်လောက်လုံ လဲပေါ့ဗျာ။
သူတစ်ပါးအသက်သတ်ခြင်းမှ ရှေင်ကျဉ်တာ ဒီအနက်က ဘုရားမပွင့်လည်းရှိနေတဲ့ အနက် ဒါမှမဟုတ် အမြင်ပေါ့ဗျာ၊ သာသနာတော်တွင်းသီလအရ ပုဓ်ခွဲကြည့်တယ် နား လည်းသလောက် ပေါ့ လေ နေတ္ထိကျမ်းလာစာဖတ်နည်းအရ
ပုဒ်တစ်ပုဒ်ကိုချဲ့ယူခြင်း အာဝတ္တာဟာရ ဟူလည်းကောင်း ပရိဝတ္တနဟာရ ဟူလည်ကောင်း ဆို၏ ပိဋကတ်တော်၌ နေယျတ္ထဟုဆို၏
ပညာုရှင်တွေပြောတာဗျ။အဲ လို ဆိုတော့ ဆန့်ထုတ်ကြည့်တယ်ပေါ့လေ သီလတစ်ခုခြင်းကို ဇစ်မြစ်လိုက်တယ်ပြောပြောအဆုးံထိလိုက်တယ်ဆိုဆိုတွေးရအောင်ပြီးတော့ကျနော်တို့ကျင့်ရအောင် နော အဲခုနက ပထမသီလဖြစ်တဲ့ ပါဏာတိပတသိက္ခာပုဒ်ရဲ့
သီလတစ်ခုကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ကျင့်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီကျနော်တွေးမိတဲ့ အချက်သုံးချက်နဲ့ ပြည့်စုံပါမှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သီလဖြစ်မှာပါ၊ လောကမှ အဓမ္မတရားတွေ မထွန်းကားဖို့ အရပ်ပြောသီလ၊ အရပ်ပြော သမာဓိ၊ အရပ်ပြောသတိ၊ အရပ်ပြောပညာတို့ကို ဖြည့်နေရုံလေးနဲ့ မဖြစ်ရေးခြာမဖြစ်ပါ။
အခုဟာက၀ိနည်းရှောင် “ငါမသတ်ရင်ပြီးဆိုပြီး သီလလုံနေတဲ့ ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် ရှက်နေမိတယ်ဗျ ဒီတော့ တစ်ဖက်သားကို နစ်နာအောင် လုပ်တာလည်း သွယ်ဝိုက်အနက်အရ ပါဏာတိပါတသိက္ခာ ပုဒ်ကို ချိုးဖျက် တာပါပဲ။
ဆန်ကျင်အနက်အရ သူ့အသက်ရှည်အောင် အားထုတ်ခြင်း တဲ့ဗျာ ကျနော်တို့ ဘယ် လောက် ကြိုးစားပြီပြီလဲ..? စဉ်စားပေးပါ ။
ပရမတ်ရှုထောင့်က နေပြီး ကြည့်ရင်တော့ ပါဏာတိပါတ ကံပုဒ်ရဲ့ တရားကိုယ်က ဒေါသ၊
ဒီဒေါသတရားကို မိမိသန္တန်မှာ မလာအောင် စောင့်ထိန်းနိုင်ပါမှ၊ သတိနဲ့ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါမှ ဒေါသရဲ့ ဆန့်ကျက်ဖက် အဒေါသခေါ် မေတ္တာတရားကို အချိန်ပြည့် ပွားစီးနိုင်ပါမှ ပါဏတိပါတကံကို ဘုရား အလိုတော်ကျ ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ကျင့် နိင်ပါလိမ့်မယ် ဗျာ။
ကဲပါဏာတိပါတ ပြည့်စုံအောင် လုံသလား.. ကျနော် ဘာသာပြန် မေးတော့ “မလုံ” ဆိုတဲ့ အသံလေး ထွက်လာသဗျ။
ပထမကတည်းက အမှတ်မရတဲ့အထဲ အခုဒုတိယသီလတော်မြတ်ကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ ဆင်ခြင်နေပါပြီ ။
ခုနကပြောသလိုပေါ့လေ ပြန်စဉ်းစားတယ် ငါမခိုးဘူးဆိုတဲ့ ဟာလေးနဲ့လုံလောက်သလား
ဘယ်လောက်ထိ အနစ်နာခံ ပေးဆပ်ခဲ့ဘူးလဲ ၊ ရယူတာနဲ့ ပေးဆပ်တာ ဘယ်ဟာများလဲ
မခိုးပေမဲ့ ခြိမ်းခြောက်တာ၊ မပေးပေးအောင် ဥပါယ်တံမျဉ်သုံးတာလေးတွေ စဉ်စားပေးပါဗျာ။
ပရမတ္ထရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဒိန္နဒါနသိက္ခာပုဒ်ရဲ့ တရားကိုယ်က လောဘ
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်စဉ်းစားတယ်၊ ပြန်ကြည့်တယ်ဗျ၊ ဗိုက်ထဲလောဘတွေ ချိုးပြည့်နေတာ တွေ့တော့ သွားပြန်ပြီပေါ့ဗျာ နော်တစ်မှတ်။
နော်ထပ်ဆက်ပြီး စစ်ရဦးမှာလားဗျာ နောက်ထပ်ဆက်ပြီစစ်ရရင်တော့ ...
2009 မှာဆွေသဟာ ဧငြိမ်းကြည်သာရှိပါစေ
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 29.12.087ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
တကယ်တော့ငါဟာ အလကားလူပါ။ ။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 27.12.087ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
အညွှန်း ၊ ကဗျာ
အခုတလောစာရေးနေတာ မပြီးတာကများနေတယ် ဟိုဟာလေးရေးရကောင်မနိုးနိုး ဒီဟာလေးရေးရကောင်းမနိုးနိုးနဲ့ပေါ့ဗျာ နောက်ဆုံးတော့လည်း ခပ်ညံ့ညံ့ကျနော်က အဟောင်းလေးပဲ ပြန်တင်လိုက်တယ်ဗျာ။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 26.12.082ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
19.12.08 နေ့က မနက်အစောကြီး၊ ကိုစိုးရောက်လာတော့ စိတ်ထဲထူးဆန်းနေတယ်၊ မလာစဘူး အလာထူးတဲ့အချိန်မို့လို့ပါ၊ အစ်ကိုကျနော်နဲ့ ခဏလိုက်ပါတဲ့” “ဘယ်တုံး” လို့မေးတော့ “ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလကို ပြန်ပို့ဖို့်နဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့လေ” တဲ့
ဪ.. အခုမှသတိရဖြစ်တာက.. ဒီညီလေးတွေက တရားပွဲအလှူရှင်များ၊ မြိတ်ကိုကြွလာကြတဲ့ ဆရာတော် တော်တော်များများကို နှစ်စဉ်ပင့်ပြီး တရားအလှူ ပေးနေကြတာမို့ ခုဆရာတော့်ကို ပြန်ပို့ဖို့အတွက်၊ တရားပွဲများ မသွားနိုင်သော ကျနော့်အား၊ ဖူးတွေ့စေချင်သည် ထင်၏။
“အဲလိုဆိုလည်း သွားကြတာပေါ့ဗျာ.. ဒါပေမဲ့ခဏစောင့်.. ကျနော်က စီစဉ်စရာလေးတွေ ရှိလို့၊ တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီနေ့လည်ဘက်၊ ပစ္စည်းပို့ရမဲ့ ဆိုင်စာရင်းကို၊ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကိုလွှဲမှ နို့မဟုတ်ဘူးဆို၊ ဘာမှန်းမသိဖြစ် နေမှာမို့ပါ။
လုပ်ပြီးတာနဲ့ တစ်ခါတည်း ဆရာတော့်ကားနောက်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ မှီအောင်လိုက်ရပြန်တယ်၊ အေး ရတဲ့အထဲ ဆိုင်ကယ်ကို ဇတ်လိုက်မောင်းသလို မောင်းရတော့၊ ရင်ထဲပိုအေးလာတယ်၊ တောတွေ၊တောင်တွေ၊ ဓာတ်တိုင်တွေ၊ ကျန်ခဲ့၊ ပါးပါးလေး ကျနေတဲ့နှင်းကိုခွဲရင်း ဆရာတော့်ကား အမှီလိုက် မောလိုက်တာ၊ ဆောင်းမနက်ကချွေးပြန်တယ်၊ ကြောက်လို့လားမသိ၊ မှီအောင်လိုက်ရမှာမို့သာ။
ဆိုင်ကယ်ကို မြှားပစ်သလိုမောင်းနေရတာ၊ ကားနှစ်စီးစာတောင်မကျယ်တဲ့ လမ်းကျဉ်းလေးမှာလေ၊ သတိနဲ့ပေါ့ဗျာ။ အတော်နောက်ကျနေပြီလေ၊ ကျနော်ကတွက်ပြီးသား မမှီတော့ဘူးပေါ့၊ ကျွဲကူးရောက်တော့မှ ဆရာတော့်ကို တစ်ဖက်ကျောက်ဖျာကမ်းကို ပို့ပြီးပြန်လာတဲ့ ညီလေးတွေက အစ်ကိုကြီးရေ ဆရာတော် စောင့်နေသေးသဗျ၊ အစ်ကိုကြီးနဲ့ကိုစိုးကို အချိန်နှေင်းနေမမှာနဲ့ကြွသွားတာ။
ဒီတော့ မြို့ကိုပြန်မလားပေါ့၊ ကျနော်စဉ်းစားတယ်.. ဆရာတော်ကြီး ကျောင်းနဲ့လည်း နီးနေပြီဆိုတော့ “ညီလေးတွေကိုတော့ ပြန်ကြတော့၊ ငါဆရာတော်ကြီးဆီဝင်မယ်ပေါ့.. ဘယ်သူလိုက်မလဲ”
ဘယ်သူမှမလိုက်တော့၊ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ ဆရာတော်ကြီးဆီကို ၀င်သွားလိုက်တယ်။ ဆရာတော်ကြီးကျောင်းကို ၀င်တဲ့လမ်းက၊ ကျဉ်းကျဉ်းလေးဗျ၊ ကတ္တယာလမ်းလေး၊ ကျောင်းကလျှိုထဲမှာဆိုတော့၊ တောင်ပေါ်တက်ပြီးမှ ပြန်ဆင်းရတာလေ တောင်ဆင်းလေးပေါ့ဗျာ၊ တောင်ထိပ်ကနေကြည့်တော့၊ အလှအပတွေပေါ့ဗျာ စိမ်းနေတဲ့လယ်ကွင်းတွေ၊ ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့ စေတီတော်တွေ၊ ရေ၀ိုင်းနေတဲ့ ကျွန်းရဲ့အလှက ပိုပြီးပီပြင်လာတယ်၊ ဒီလိုနဲ့တစ်ယောက်ထဲ အေးအေးလူလူသွာရင်း တွေးရင်း ဆရာတော့်ကျောင်းဝရောက်တော့ ဆိုင်ကယ်စက်ရပ်ပြီး အသံမကြားအောင် အရှိန်လေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ ဆရာတော် စံကျောင်းရှေ့မှာနား၊ အာ.. ကျောင်းဝင်းထဲရောက်လေ ပိုချမ်းလေပဲ၊ တောတွေဝိုင်းနေ တဲ့တောရကျောင်းလေး။
ဆရာတော့်စံကျောင်းက တိတ်ဆိတ်လို့၊ အေးချမ်းလို့၊ အပြင်ဘက်ကရှိတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တလင်းပြင်လောကနဲ့ ဘာမှမဆိုင်သလို၊ တည်ငြိမ်မှုအပြည့်နဲ့ ကျနော့်ကိုကြိုနေသလို။ ဆရာတော်လည်း ဒီလိုပါပဲ၊ ကျနော်ရောက်တော့ ကျောင်းပေါ်မှာမရှိ၊ မရှိဆို ထိုင်နေကျ ပက်လက်ကုလားထိုင်လေး အပေါ်မှာ လဲလျောင်းတော်မူနေကျ ခုတင်ညောင်စောင်းပေါ်မှာပါ၊ ကျနော့်စိတ်ထဲ စိုးရိမ်သွားတယ်၊ တစ်ပါးတည်းများ ကုဋီဝင်နေလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကူဋီတံခါးခေါက်တော့၊ အသံမပြု၊ ဖွင့်ကြည့်တော့လည်းမရှိ၊ ဟို စိတ်ပူတာက၊ တစ်ပါးတည်းကုဋီတက်ရင် တွဲသူမဲ့နေမှာစိုးလို့၊ သက်တော် ၉၆ - ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာတော့်မှာ၊ အကူမရှိရင် အထိုင်အထခက်မှာမို့ပါ၊ ဒီတော့ကျောင်းအောက်ပြန်ဆင်း၊ ကျောင်းဝင်းထဲလိုက်ရှာ၊ တစ်ခြားဦးဇင်းတွေက ဆွမ်းခံကြွနေချိန်မို့ ဆရာတော်တစ်ပါးတည်း လမ်းလျှောက်နေတတ်တာကိုး၊ ဟောတွေ့ပါပြီ.. သတိအပြည့်နဲ့ စင်္ကြန်ကြွနေတဲ့ မထေရ်၊ ခဏလေးလက်အုပ်ချီပြီး စောင့်နေတုန်းမှာပဲ။
ဆိုတော့ဆရာတော့်ကိုတွဲရင်း ကျောင်းပေါ်တက်လိုက်မိတယ်။ ဆရာတော်ကခုတင်ပေါ်တက်တော့၊ ကျနော်လည်း ၀တ်ဖြည့်ရမှာသိတာမို့၊ ဆရာတော့်ကိုဝတ်ဖြည့်နေရင်း ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကို နာမိနေတယ်။
“မှတ်ထားဗျ၊ သူတော်ကောင်းတရားပျက်စီးရင် လောကပျက်စီးမယ်၊ သူတော်ကောင်းတရား ကြီးပွားရင် လောကကြီးပွားမယ်၊ ဟုတ်လားသားငယ်”
ဟုမေးလာတော့လည်း၊ သင်ပြဖို့ တောင်းပန်လျှောက်ထားရပြန်တယ်၊ သင်ပေးပါဘုရား…
“သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ၊ ဟိရိ၊ အနောတပဆိုတာ သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေဗျ၊ ဒီတရားကို ကျင့်ရင်သူတော်ကောင်း မကျင့်ရင် သူယုတ်မာပေါ့ဗျ၊ ဟုတ်ပြီလား”
“နဲနဲပြောဦးမယ်ဗျာ၊ ဒီနေရာမှာ၊ ဘာလဲဆိုတော့၊ သီလကလည်း ရှိဟန်ဆောင်လို့ရတယ်၊ သုတလည်း ရှိဟန်ဆောင်လို့ရတယ်ဗျ၊ ဒါပေမဲ့စာဂဆိုတဲ့၊ စွန့်ကြဲခြင်းက ဟန်ဆောင်လို့မရဘူးဗျ၊ အခုခေတ် ထောင်မြင်ရာစွန့်တဲ့၊ အဲဒါစာဂမဟုတ်ဘူးနော်၊ ထောင်မြင်လို့ ရာစွန့်တာက “ဿသတအစွန်းဗျာ”
“ပေးလိုက်ရင်နားအေးတယ်ဗျာ ဆိုတာက “ဥစ္ဆေဒအစွန်းဗျ” ဟုတ်လားသားငယ်..
ဓမ္မစင်္ကြာနဲ့ကြည့်ရင်တော့ “အတ္တကိလမထအစွန်းနဲ့ ကာမေသု ကာမသုခလိက္ကာနုယောဂေါ အစွန်းပေါ့ဗျာ”။
အဲဒီအစွန်းတွေနဲ့ လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိနေသမျှတော့ ဟန်ဆောင်သူတော်ကောင်းပဲဗျနော။
“ဒီတော့သားငယ်ရ၊ ဘယ်လောက်စွန့်နိုင်လဲဆိုတဲ့ပြယုဂ်က၊ သူတော်ကောင်းနဲ့ သူယုတ်မာခွဲဖို့ အထင်ရှားဆုံးဗျ”
ဆရာတော်တရားကို နာယူရင်း ကျနော်ပြန်မေးမိတယ်ဗျာ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့လေ..
ဆရာတော် ရေချိုးတော့မှာမို့၊ ကျနော်ဦးချဝတ်ဖြည်ြ့ပီး အိမ်အပြန်ခရီးစပေမဲ့၊ အတွေးရင်ခွင်ထဲမှာတော့ မေးစရာတွေက၊ ကျန်နေဆဲလေ။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 20.12.083ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
နှင်းဆီရဲ့ရနံ့ကြောင့် ကျွန်တော်အိမ်ပြန်နောက်ကျခဲ့တာပါ။ ကြားဖူးနားဝရှိခဲ့တဲ့အချစ်အကြောင်းကို ကျွန်တော်ရင်ခုန်ရင်း ဘာသာစကားအသစ်တွေ။ ဆန်းသစ်တဲ့အ်ိပ်မက်။ တိမ်းမူးတိမ်းမက်ဝေဒနာ။ အဲဒီမှာကျွန်တော်အဆိပ်တက်နေခဲ့တာပါ။ အကျီအဖြူ လုံချည်အစ်ိမ်း အဖြူရောင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ပြီးတော့ မမြင်ဖူးသောနေ့များ ညများ ဒီနွေများထဲမှာ ကျွန်တော်အရူးအမူး သာယာနေခဲ့မိတာပေ့ါ။
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ မတူညီတဲ့ဘ၀ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ အဆိပ်တက်ဆူးတွေ ရေးရေးလေးတောင် ကျွန်တော်မသိတတ်ခဲ့ဘူးလေ။ ခြေရာ ချင်းထပ် ချစ်သူရှိရာအရပ် ။ ခိုးဝှက်မှတ်သား ချစ်သူအပြုံးလှလှလေးများ။ မပေးဖြစ်ခဲ့သော ကဗျာလေးတွေ ကျောင်းစာအုပ်တွေရဲ့နောက်ကျောဖက်မှာ ပိုင်ရှင်မဲ့လို့ တိတ်တိတ်ရှိုက်နေ။ ရေးခြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာတိုတပိုင်းတစလေးတွေ ကျောင်းခုံတန်းရဲ့ထက်မှာ ပြန့်ကျဲလို့ အစီအစဉ် အစဉ်မကျ။ တီးတိုးရွတ်ဆို ကာရန်ပျိုလေးတွေ ဟိုတစ်စ သည်တစ်စ။စီရီသီကုံး နင့်နာမည် အက္ခရာလေးလုံး ဂါထာတပုဒ်လို တဖွဖွရွတ် သိပ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ။ ချစ်သူ့အြ့ပုံး ချစ်သူ့အရိပ် ဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့ အဖြုရောင်နေ့ရက်တွေ။ ချစ်သူမျက်နှာလေးကိုတိတ်တိတ်လေးငေးရင်း ဘ၀မှာ ကျွန်တော်ဟာ မရှုမလှပျော်ခဲ့ရဖူးတယ်။
သံယောဇဉ်ဆိုတာ မိုးဦးကျမှာပွင့်တဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ပါပဲ။ အဲဒီလိုမျိုး…အစွမ်းကုန်ပွင့်အာပြလိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်း အဲဒီနေ့တွေဟာ ရွေအိုရောင်တွေပေကျံတောက်ပနေခဲ့တာပေါ့။ တီးတိုးကြိတ်မှိတ် မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ စကားတွေ ရာထောင်ချီ နေရာတိုင်းနံရံတိုင်းမှာ ပဲ့တင်ထပ်နေပြီ။ချစ်သူရေ…နားလည်ပါ။ ငါ့ကိုနားလည်ပေးစမ်းပါ။ ရင်ထဲကလာတဲ့အချစ်ဆိုတာ တခါတလေတော့လဲ ကာရန်မပြေတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အရာရာသည်စနစ်တကျ ပျက်ချော်မှားယွင်း တို့ဆုံဆည်းခြင်းကလည်း ညိုပြီးမှ မပြိုဆင်းခဲ့တဲ့ တိမ်မိုးတွေလိုနောက်ဆုံးတော့လဲ အိပ်မက်တွေ လန့်နိုးခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား။ ထုဆစ်ခဲ့တဲ့ တခြမ်းပဲ့ အိပ်မက်တွေ တနေ့ထက်တစ်နေ့ တရွေ့ရွေ့ဝေးကွာ ည…ညများစွာအမှောင်။ ဒီလမ်းအိုဟောင်းလေးလဲ နွေနဲ့အတူ ခြောက်သွေ့။ နင့်အသံ နင့်အရိပ်အခုတော့လဲ အသံဆိတ်လို့ နွေေ၇….နင်ေ၇ာက်လာတာ စောလွန်းတယ်။ရေးတာပါ၊တင်ပေးပါတဲ့၊အင်မတန်ရိုးပြီး အရိုင်းဆန်တဲ့ ညီးလေးရဲ့ နှလုံးသားမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့လေ
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 3.12.08 1 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊